Jamil Velji Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Jamil Velji
Kunyangwe kuve neyakagadzikana sosi yekutungamira yatove chinhu chakakura kune chero bhizinesi, hazviunze chikafu kune ndiro. Iwe uchave unofara kana yako yekutengesa kudzoka yakaenzana kune yako inoshamisa Google Analytics mushumo. Mune ino kesi, zvirinani chikamu cheizvi zvinotungamira chinofanirwa kushandurwa kutengesi nevatengi. Ko kana iwe uri kuwana matani ekutungamira, asi hapana kutengesa? Chii chausiri kuita nemazvo, uye chii chaungaite